MUQDISHO, Soomaaliya - Aqalka Sare ayaa maanta Gudi dhex-dhexaadin ah u magacaabay Xiisadda Siyaasadeed ee u dhaxaysa Xildhibaanada Gollaha Shacabka ee ka dhashay Mooshinka laga soo gudbiyay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Kulan ay Maanta oo Sabti ah ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha Gudiga Joogtada ee Aqaka Sare ayaa looga dhawaaqay Gudiga kaasi oo ka kooban 7 xubnood, islamarkaana gudoomiye u ah gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
1 - Cabdi Xaashi Cabdullaahi [Gudoomiye]
2 - Mowliid Xuseen Ducaalle [Xubin]
3- Samsam Ibraahim Cali [Xubin]
4 - Cabdi Xasan Cawaale [Qeybdiid] -Xubin
5 - Maxamuud Axmed Mashruuc [Xubin]
6 - Maxamed Amiin Sheekh Cismaan [Xubin]
7 - Muxyadiin Sheekh Cali Jaamac [Xubin]
Xoghayaha Gollaha Sare ayaa sheegay in Gudiga uu ka shaqeyn doono sidii xal loogu heli lahaa Xaaladda ismariwaagga ah ee ka dhex-taagan Gollaha Shacabka.
Aqalka Sare ayaa ugu baaqay Hay'addaha dowladda inay ilaaliyaan xasiloonida dalka, iyadoo dhanka kale Xildhibaanada Gollaha Shacabka laga codsaday in Khilaafka jira ku xaliyaan si waafaqsan Dastuurka iyo Xeer-hoosaadka Gollaha.
Dhinacyada Khilaafka u dhaxeeya ayaa loogu baaqay inay kala shaqeeyaan Gudiga uu magacaabayy Aqalka Sare sidii Gollaha Shacabka loogu soo celin lahaa degenaanshihii, xasiloonidii iyo wadashaqeynta ee ka jirtay.
Magacaabista Gudigan ayaa kusoo beegmaysa xilli Xiisadda ka dhalatay Mooshinka Jawaari cirka isku sii shareerayo, islamarkaana maanta uu baaqday Fadhigii Gollaha Shacabka, oo hadda ay la wareegeen Ciidamoo cusub.